एउटा अनौठो परम्परा,जहाँ हरेक वर्ष महिलाहरूले अपरिचित पुरुषसँग ७ पटक यस्तो गरेपछि…. महिलाको मनको इच्छा पूरा हुने!!! – News Nepali Dainik
एउटा अनौठो परम्परा,जहाँ हरेक वर्ष महिलाहरूले अपरिचित पुरुषसँग ७ पटक यस्तो गरेपछि…. महिलाको मनको इच्छा पूरा हुने!!!
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण २२, २०७७ समय: २१:२६:०५
हामीकहाँ परपुरुषसँगको सम्बन्ध अ’वैध र घृ’णित मानिन्छ तर इन्डोनेसियाको पोन नामक पर्वमा महिला तथा पुरुषहरू माउन्ट केमुकस पुग्छन् । त्यहाँ महिलाहरूले आफूलाई मन पर्ने कुनै अपरिचित पुरुषको खोजी गर्छन् अनि मनले खाएको पुरुष फेला परे सहमतिमा शारिरिक सम्बन्ध राख्छन् । हरेक ३५ दिनमा जब यो पर्व आयोजित हुन्छ, महिलाहरूले सोही पुरुषसँग शारिरिक सम्बन्ध गर्नुपर्छ ।